काठमाडौंको न्युरोड गेटमा घट्यो अनौठो घटना , जे न हुनु थियो त्यही भयो ? « Gaunbeshi
काठमाडौंको न्युरोड गेटमा घट्यो अनौठो घटना , जे न हुनु थियो त्यही भयो ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा प्रहरीको गाडीबाट हा’मफा’ले‍र एक जना थुनुवा फरार भएका छन् । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका थुनुवा निर्मल परियार काठमाडौंको न्युरोड गेटबाट भागेका हुन् जब र्ज’स्ती क रणीको आरोपमा पक्राउ परेका उनी महानगरीय प्रहरी वृत जनसेवाको नियन्त्रणमा थिए ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख ९एसएसपी० अशोक सिंहका अनुसार पीसीआर परीक्षण गराउन वीर अस्पताल लाँदै गर्दा परियार फरार भएका हुन् । स्याङ्जा घर भएका परियारको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।